गर्मी संक्रान्ति के हो? | नेटवर्क मौसम विज्ञान
गर्मी संक्रान्ति के हो?
हाम्रो ग्रह, अरू सबैले जस्तै, आफैंमा घुमाउँछ र यसको ताराको परिक्रमण पनि गर्दैछ, जुन यस अवस्थामा सूर्य हो। हरेक धेरै चोटि डेलाइट घण्टा परिवर्तन हुन्छ, कम वा बढाइएको छ, तारा राजाको उचाईमा निर्भर गर्दछ।
२० को २१ औ २१ औं जुनको बीचमा जूनको पेन्सलमेटि साप्ताहिक तर्फ, ग्रीष्म संक्रांति उत्तरी गोलार्द्धमा हुन्छ। विश्वको अन्य भागमा, दक्षिणी गोलार्धमा, यो घटना डिसेम्बर २० र २१ बीचमा हुन्छ। तर, वास्तवमा यो के हो र यो किन यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ?
1 संक्रान्ति को परिभाषा के हो?
1.1 गर्मी संक्रान्ति के हो?
1.2 किन गर्मी संक्रान्ति सबैभन्दा तातो समय छैन?
2 वर्षको सब भन्दा लामो दिनको बारेमा जिज्ञासा
2.1 फिएस्टा डे सान जुआनको उत्पत्ति के हो?
3 २०१ the मा गर्मी संक्रांति कहिले हो?
संक्रान्ति को परिभाषा के हो?
यो संक्रांति भनेर चिनिन्छ वर्षको समय जब सूर्य भूमध्यरेखाबाट ग्रहणको सबैभन्दा टाढाको बिन्दु मध्ये एक पार गर्दछ। त्यसो गर्दा दिन र रातको अवधिमा अधिकतम फरक दिइन्छ। यसप्रकार, गर्मी संक्रान्तको समयमा दिन सबैभन्दा लामो हुन्छ, जबकि जाडोमा संक्रान्ति सबैभन्दा छोटो हुन्छ।
यसलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि, हामी एक्लिप्टिक भनेको के हो व्याख्या गरेर सुरू गर्न जाँदैछौं। साथै। हामीलाई थाहा छ सूर्य एउटा तारा हो जुन सधैं आकाशमा स्थिर हुन्छ; यद्यपि पृथ्वीमा हाम्रो दृष्टिकोणबाट यो देखिन्छ कि यो वास्तवमा गतिशील छ। यो काल्पनिक मार्ग जुन सूर्य "यात्रा" गर्भाशयको रूपमा चिनिन्छ।, जुन एक रेखा हो जुन बर्षमा विश्वभर हुँदै जान्छ। यो वक्र रेखा पृथ्वीको कक्षाको प्लेसको चौराहे द्वारा आकाशीय क्षेत्रको साथ बनेको छ।
जब सूर्य क्यान्सरको उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रको सबैभन्दा माथिल्लो उचाईमा पुग्छ, गर्मी उत्तरी गोलार्धमा शुरू हुन्छ; अर्कोतर्फ, यदि यो मकर राशिको उष्ण कटिबन्धीय भागमा देखा पर्दछ, भने यो दक्षिणी गोलार्धमा हुनेछ जहाँ दिन लामो हुन्छ। गर्मी संक्रान्ति कहिले हुन्छ? उत्तरी गोलार्द्धमा यो जून २० वा २१ छ, जबकि दक्षिणमा यो डिसेम्बर २० वा २१ हो।
किन गर्मी संक्रान्ति सबैभन्दा तातो समय छैन?
यो प्राय: सोच्दछ कि त्यो दिन, गर्मी theतु को पहिलो, सबैभन्दा तातो छ। तर यो वास्तवमै छैन। पृथ्वीको वातावरण, हामी हिंड्ने भूमि र समुद्रहरूले सौर ताराबाट उर्जाको केही अंश लिन्छ र भण्डार गर्दछ। यो उर्जा तापको रूपमा फेरि जारी गरिएको छ; जे होस्, यो याद राख्नुहोस् जबकि पृथ्वीबाट ताप एकदम चाँडो छोडिन्छ, पानी लामो समय लिन्छ।
ठूलो दिनमा, जुन गर्मीको संक्रांति हो, दुई गोलार्ध मध्ये एक हो यस वर्षको सूर्यबाट अधिक ऊर्जा प्राप्त गर्दछकिनकि यो राजा ताराको नजिक छ र, त्यसकारण, उल्लेखित ताराको किरणहरू अधिक सीधा आइपुग्छन्। तर महासागरको तापक्रम र भूमि अझै पनि कम वा कम हल्का छ, अहिलेको लागि।
यो व्याख्या गर्दछ किन ग्रह 71१% पानीले ढाकिएको छ भने पनि मध्य गर्मी सम्म कुनै विशेष दिन तातो दिनहरू हुनेछैन.
वर्षको सब भन्दा लामो दिनको बारेमा जिज्ञासा
यो दिन धेरैले पर्खिरहेका छन्। यो त्यो दिन हो जब तपाईं बाहिर जानुहुन्छ र साथीहरू भेट्न चाहनुहुन्छ जुन गर्मी अन्तमा फिर्ता आयो र चाँडै हामीसँग फुर्सत समय हुनेछ कि हामी आफैंलाई बिच्छेदन गर्न र आफूलाई सबैभन्दा बढी मन पर्ने कुराको लागि समर्पित गर्न सक्दछौं। तर, तिमीलाई थाहा छ यो कसरी मनाइन्छ?
ग्रीष्म संक्रांति लामो समयको लागि मनाइएको छ, मानवताले घरहरू निर्माण गर्न सुरु गर्नुभन्दा पहिले पनि हामी तिनीहरूलाई चिन्छौं। यो त्यो दिन थियो जहाँ शक्ति र जादू वास्तविक पात्रहरू थिएजसले आफैंलाई शुद्ध पार्छ जब तिनीहरूले सूर्यलाई बाली, फलफूल र बत्तीको बढेको घन्टाका लागि धन्यवाद दिए।
प्राचीन इजिप्टमा, उदाहरणका लागि, तारा सिरियसको उदाउँदो ग्रीष्म सst्कट र नदीको वार्षिक बाढीसँग मिल्छ जुन उनीहरूको निरन्तरता सुनिश्चित गर्दछ: नील नदी। उनीहरूको लागि यो नयाँ वर्षको थालनी थियो, किनकि नदी उठे पछि मात्र तिनीहरूले आफ्नो भोजन उमार्न सक्थे।
फिएस्टा डे सान जुआनको उत्पत्ति के हो?
यो संसारमा सब भन्दा पुरानो उत्सव मध्ये एक हो। ठ्याक्कै मूल पत्ता लगाउँदा समयमा हराउछ। Yesteryear सूर्य पृथ्वीको प्रेममा विश्वास गरिएको थियो र यसैले उसले उनलाई त्याग्न चाहेनन्। यस कारणले गर्दा, मानिसहरुले सोचे कि तिनीहरूले जून २ on मा स्टार राजालाई उर्जा दिनु पर्छ, र यसको लागि प्रकाश बोनफाइर भन्दा के राम्रो छ.
तर पनि, खराब मनोभाव हटाउन र राम्रो व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्न यो उत्तम समय हो भन्ने विश्वास गरिन्छ। अझै, दुई हजार वर्ष पहिले इसाईमतको आगमन संगै यो उत्सवको आकर्षण हरायो। पवित्र ग्रन्थका अनुसार जकारियासले आफन्तहरूलाई उनका छोरा जुआन बाउटिस्टाको जन्मको घोषणा गर्न बलात्कारको आदेश दिए जुन ग्रीष्मकालीन संक्रान्तिको रातसँग मिल्दोजुल्दो छ। त्यो मिति मनाउन, मध्यकालीन युगका मसीहीहरूले ठूला बोनफाइरहरू जलाए र विभिन्न रीतिथितिहरू प्रदर्शन गरे यसको वरपर
हाल त्यस दिनको फाइदा लिन्छ समुद्री तटमा साथीहरू भेट्न, आगो वरिपरि र आनन्द लिनुहोस्; यद्यपि अझै केहि संस्कारहरू बाँकी छन्, जस्तो कि छालहरू हाम फाल्ने, बोनफाइरहरूमा जान वा नुहाउने भनेर ताकि भाग्यले हामीमाथि हाँस्।
२०१ the मा गर्मी संक्रांति कहिले हो?
२०१ promises को सबैभन्दा विशेष दिनहरू मध्ये एक हुने प्रतिबद्धता के हो, त्यो हुनेछ बुधवार, जून २१ ० 21:२, कि हो, यो गर्मी मौसम को शुरू संग आधिकारिक मिति संग मेल खान्छ।
र तपाइँ, तपाइँ जान्नुहुन्छ कि तपाइँ कसरी गर्मी solstice मनाउन जाँदै हुनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Ciencia » गर्मी संक्रान्ति के हो?
क्यानेडाली मौसम परिवर्तन अध्ययन जलवायु परिवर्तनका कारण रद्द गरियो